NAHITA fahasahiranana maro i Adama sy Eva tany ivelan’ny zaridainan’i Edena. Tsy maintsy niasa mafy izy mba hahazoana sakafo. Ho solon’ny hazo fihinam-boa tsara tarehy, dia tsilo sy hery no hitany naniry nanodidina azy. Izany no nitranga rehefa tsy nankatò an’Andriamanitra i Adama sy Eva ka nitsahatra tsy ho sakaizany.
Nefa ny mbola ratsy noho izany, dia nanomboka nihamaty i Adama sy Eva. Tsarovy fa Andriamanitra dia nampitandrina azy ireo fa ho faty izy raha mihinana ny voan’ny hazo iray. Tamin’ny andro izay nihinanany àry dia nanomboka nihamaty izy. Endrey ny hadalan’izy ireo noho ny tsy fihainoana an’Andriamanitra!
Taorian’ny nandroahan’Andriamanitra an’i Adama sy Eva avy ao amin’ny zaridainan’i Edena no niteraka ny zanany rehetra izy ireo. Milaza izany fa tsy maintsy hihantitra koa ny zanany ary ho faty.
Raha mba nankatò an’i Jehovah mantsy i Adama sy Eva, dia ho nanana fiainana sambatra izy sy ireo zanany. Tokony ho velona mandrakizay tao anatin’ny fahasambarana teto an-tany izy rehetra. Tsy tokony ho nisy olona antitra, marary ary maty.
Tian’Andriamanitra ho velona mandrakizay ao anatin’ny fahasambarana ny olona, ary mampanantena Izy fa hahita izany izy ireo indray andro any. Tsy hoe ho tsara tarehy fotsiny ny tany manontolo, fa ny olona rehetra koa dia ho salama. Ary ny tsirairay eto an-tany dia ho sakaiza tsaran’ny hafa rehetra sy Andriamanitra.
Nefa dia tsy sakaizan’Andriamanitra intsony i Eva. Noho izany, rehefa niteraka ireo zanany izy dia tsy mora taminy izany. Nanaintaina izy. Tsy isalasalana fa nitondra alahelo be ho azy ny tsy fankatoavana an’i Jehovah, sa tsy marina izany?
Nanana zanakalahy sy zanakavavy maro i Adama sy Eva. Rehefa teraka ny zanaka lahimatoan’izy ireo, dia nantsoiny hoe Kaina. Nomeny anarana hoe Abela ny zanany lahiaivo. Inona no nitranga tamin’izy ireo? Fantatrao ve?
Genesisy 3:16-23; 4:1, 2; Apokalypsy 21:3, 4.
Hizara Hizara Nanomboka ny Fiainana Mafy Iray
my tant. 5